PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-12-06 - Baza kuzisusa neengcambu iziyobisi ooKhetshe
Baza kuzisusa neengcambu iziyobisi ooKhetshe
IBE liqela labacuphi abathathu ababalasele ekuphandeni ngeziyobisi elibizwa ngokuba yiProject Damage ababuye nelona wonga kumawonga ooKhetshe ebebanjelwe eRegent Hotel eMonti ngempelaveki, nabizwa ngokuba ziiHawks Prestige Awards.
La mawonga asungulelwe ukuwonga impumelelo kumsebenzi owenziwa liqela lamapolisa aphanda ngamatyala anobuzaza ooKhetshe.
Eli qela nguWarrant Officer Nkosinathi Mpepho, Warrant Officer Xolisile Hlulani kwakunye noKapteni Raymond Buys.
Iwonga labo liza emva kokuba bathi bafumana iziyobisi ezixabisa izigidi ngezigidi zeerandi eBerlin naseVincent nakwezinye zeendawo ezingqonge iMonti.
Uthi nakuKomani bafumana iingxowa ezingamashumi amathathu zeziyobisi zohlobo lwemandrax .
UMpepho nosele enamashumi amabini anesithoba esebenza kweli candelo lokuphanda ngeziyobisi, nathi oku sele kusegazini kuye, uthi kuluvuyo kubo kakhulu ngempumelelo yabo nangona nje esithi xa besenza umsebenzi wabo abenzeli mawonga, benzela ukucoca iphondo.
“Siyavuya sizithoba nakwabo bacinge ukuba makubekho into enje eza kuthi isikhuthaze nangakumbi kumsebenzi wethu. Asenzeleli kuba sifuna ukuwongwa senza umsebenzi wethu sinenjongo ezintle ngawo kuba sifuna ukubona iphondo leMpuma Koloni licocekile.
“Ukuzinikela kumsebenzi wakho kwaye ungatshomani noongqondongqondo beziyobisi, kwaye unganyoluki awusoze uhambe usoyika endleleni ingakumbi uzazi awunasazela santo koko wenza okubizelweyo, akundoyikisi nakanye. Mna andinayo indawo endithi andiyingeni okanye andiyihambi kuba ndisenza lo msebenzi,” utshilo uMpepho.
UMajor General Kholekile Galawe ethetha egameni leNtloko yooKhetshe kuZwelonke, uLieutenant General Yolisa Matakata, evuyisana nabaphumeleleyo esithi mkhulu umsebenzi abawenzayo bonke ooKhetshe, nabangafumenanga wonga akuthethi ukuba benza umsebenzi ongabonakaliyo.
Uthe mabaqhubekeke besenza umsebenzi omhle, ekwabakhuthaza ngelithi mabaqale baphande phambi kokuba babambe ukuze bangabambi kuba beleqa ukuba kuthiwe umntu usebenzile.
Iqela looKhetshe iProject Damage abafumene elona wonga likhulu uCaptain Raymond Buys kwakunye noWarrant Officer Mpepho.